TOMEFI COMM 02 DFB MENA mai2015 par Utilisateur Windows - Fichier PDF
TOMEFI COMM 02 DFB MENA mai2015 .pdf
Nom original: TOMEFI_COMM_02 DFB MENA mai2015.pdfAuteur: Utilisateur Windows
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/06/2015 à 14:43, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1725 fois.
JOBILY FAHA-80 TAONA
MPIANDALANA SAMPANA MENA
T O M E FI 2016
Araka ny efa fantantsika ka nanaovana antso avo dia hanamarika ny Jobily faha- 80 taona ny
Sampana Mena eto anivon’ny Tily eto Madagasikara isika ny taom-panabeazana 2015-2016 izao.
Ho fiatrehana izany , ny Departemanta Fanabeazana eto anivon’ny Foibe miaraka amin’ny Ekipa Foibe
Sampana Mena dia niantso Tantsoroka Nasionaly handrindra sy hiketrika izany Jobily izany miaraka
amin’ny ekipa Foibe.
Isaorana manokana ireo izay efa nanaiky antsitrapo hanao izany andraikitra izany.
Nisy ny fivoriana voalohany niantsoana antsika Filoha sy Tranainy tao amin’ny IEP Ampandrana ka
ireto no tapaka sy nisongadina tamin’izany :
Fanolorana ireo Tantsoroka Nasionaly hitarika ny hetsika
Famaritana sy fananganana vaomiera miisa 04 handrindra ny hetsika
Fanapariahana ny Fifaninana sary famantarana sy Hira Jobily faha 80 taona
Anjaran’ny isam-baomiera no hanolotra volavolan-kevitra hitondrana ny hetsika.
Ary satria hetsika Nasionaly no atao , ny fanapahankevitra rehetra momba hetsika dia mbola ho entina
eo anivon’ny FIFITI any Toliary mba iaraha-manapaka amin’ny Filoha Sampana Mena manerana ny
nosy mialoha ny hampiarana azy.
Eto dia manentana sahady antsika Filoha sy TP TEM sampana mena rehetra hanao ho zava-dehibe ny
FIFITI any Toliary satria any no sehatra hitondrantsika fanatsarana.
Na izany aza, dia ho alefa amintsika ny mombamomba ireo Vaomiera ka ny isam-paritany dia hanana
solontena ao anatin’izany ka afaka mandefa izay soso-kevitra rehetra hitondrana ny Jobily mialoha ny
Marihina fa mpitarika ihany ireo Vaomiera , ary vonona handray ny soso-kevitra rehetra avy aty
amintsika rehetra izy ireo.
Momba ny Hira sy Logo , dia hisy vaomiera manokana hanomana sy hikarakara izany ka ny hirariana
dia ho vita mialoha ny volana Jolay izany mba ho aseho sy aparitaka any amin’ny FIFITI.
Eto ampamaranana dia mbola manao antso avo amintsika rehetra hanatevina ireo vaomiera amin’ny
fanomanana izao hetsika goavana izao ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.
Indro atolotra antsika ny mombamomba ny Jobily sy ny vaovao momba ny fifaninana Logo sy Hira.
Ny Departemanta Fanabeazana Foibe Tily (DFB)
Antananarivo faha 11 Mai 2015.
o FANASINA SY FAHAZAVANA
o ASEHOY NY TENANAO HO FIANARANA NY ASA TSARA
TOMEFI 2016 :
TOntolon`ny MEna ho an`ny FIarahamonina
Mena miainga eo amin’ny ankohonana
Mena miainga eo amin’ny Mpiray tanana
Mena miasa ho an’ny fiarahamonina
Mena miasa ho an’ny Tanindrazana
Ho TOMEFI sampana mena fianarana sy hanova ny tontolo amin’ny alàlan’ny asa tsara
Ireo ny tondrozotran-tsika MPIANDALANA SAMPANA MENA mandritra ny fankalazana ny faha 80
taona, ka andeha hiara-hientana isika Sampana Mena (Mpiandalana,Zokiolona, Filoha, Tranainy)
rehetra ho amin`ny fanatontosana io fankalazana io.
Vokatry ny fihaonana voalohany natao tao amin’ny IEP Ampandrana ny 02 may 2015 araka ny
fampiantsoana izay natao , dia toy izao no rafitra nifanarahana hitantanana izany hetsika izany :
Ny Vovonana dia rafitra iray natao hampivondronana ireo efa filoha mena tranainy rehetra
sy ireo nandalo mena ary izay rehetra te hanohana ny fanamarihana ny faha 80 taona ny
Ny Vovonana dia rafitra lehibe iray hianteheran’ny fankalazana ho filan-kevitra sy
mpanamora fifandraisana amin’ny ankolafin’olona na rafitra samihafa ivelan’ny
Ny TRAIKEFA sy FAHENDRENA entin’ireo zoky sy raiamandreny, ireo no ilo hanodina ny
fankalazana ho fahombiazana sy ho fanatratrarana ny tanjona.
Ny Vovonana anefa dia rafitra tsy mpanampa-kevitra.
Mizara ho vaomiera efatra (4) ny fankalazana ka isika filoha isam-paritany no mandrafitra azy
ireo tsirairay avy.
Entanina ny faritany rehetra mba hanana solontena fara-faharatsiny isam-baomiera.
Manampy betsaka amin’ny fientanana , ny fampitana vaovaoary ny mangarahara amin’ny
fitantanana ny fisian’ireo solontena ireo.
Andry hianteheran’ny fankalazana ary hapetraka ho lehibe sy manan-danja indrindra
amin’ireo vaomiera rehetra ny vaomieran’ny ara-panahy.
Izy no tompon’antoka amin’ny aim-panahin’ny fankalazana na ny endriny na ny vontoatiny
Mpamolavola, mpandrindra ary mpanatanteraka ireo hetsika rehetra na ara-tsokoto na hafa.
Mpitantana ny lafiny ara-bola ary manao ny tatitra rehetra amin’ny ankolafy tokony
Tompon’antoka ihany koa amin’ny fikarohana ny loharanom-bola amin’ny filàn’ny
Mpiantoka ny fanentanana sy ny fifandraisana na amin’ny samy anatiny na amin’ny any
ivelany. Kodiarana hampikorisa ny hetsika rehetra fa tsy ho hisatra ho an’ny fankalazana.
FIVORIANA FAHA-2 TOMEFI 2016: Ho fanombohana ny asa sy fanatevenana ireo efa ao anaty
vaomiera, dia antsoina isika FILOHA SAMPANA MENA REHETRA eto amin’ny Faritany 5 sy ny
manodidina eny fa na misy avy amin’ny faritany hafa vao maika tsara, sy ireo VOVONANA, ny 23 mai
2015 amin`ny 2 ora sy 30mn ao IEP Ampandrana.
Fivorian'ny Vaomieran'ny HETSIKA - TOMEFI 2016 ao Antsahamanitra ny Alarobia 20 May 2015 @
Raha mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala manantona ny Ekipa Foibe Sampana Mena
Ho tsara lalana daholo.
TOMEFI_COMM_02 DFB MENA mai2015.pdf (PDF, 538 Ko)
sampana hetsika fifiti fankalazana vovonana foibe taona jobily rehetra kevitra filoha vaomiera tsara rafitra izany
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00331726.